dhizaini: samsung galaxy s8 uye s8 + zviri $ 150 zvakachipa pane zvakanak kutenga
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Samsung Galaxy S8 uye S8 + zviri $ 150 zvakachipa paGood Buy
Samsung Galaxy S8 uye S8 + kutengesa kunotaridzika zviri nani kupfuura Galaxy S9 & apos; s , kunyangwe izvo zvingangodaro zvisina chekuita nemafoni 'maitiro, asi nekungoziva kuti nyowani mureza haugone kuunza yakawandisa kuwanda kupfuura iyo yapfuura modhi.
Kana iwe usina & apos; usaverenge nezve Samsung & apos; s gore rapfuura mureza, iwe unogona zvirokwazvo tarisa yedu izere Galaxy S8 uye S8 + wongororo yezve-zvakadzama ruzivo pane izvo zvingaite chaizvo aya mafoni epamusoro. Kana iwe ukafarira izvo iwe zvawakaverenga nezvavo, Best Buy ine zvimwe zvine mutsindo madhiri pane aya maratidziro, asi ivo vangangodaro vachakwira kwenguva yakaganhurirwa.
Iyo yakavhurwa Galaxy S8 iri kutengeswa ne $ 150 kubviswa paBest Buy, zvinoreva kuti iwe & apos; uchange uchibhadhara madhora mazana mana nemakumi mana panzvimbo pemutengo uzere wemadhora mazana matanhatu. Kune rimwe divi, iyo hombe Galaxy S8 + iri kukwikwidzira kungoita $ 540, kunyangwe nguva zhinji iwe & apos; uchizoiwana ichiwanikwa ne $ 690 chaiko.
Mhando mbiri dzisina kuvhurwa dzinowirirana zvizere nezvose zvakakura zvinotakura muUnited States, kusanganisira AT&T, Sprint, T-Mobile, uye Verizon, asi ivo vachashandawo nevadiki vemagetsi network seCricket Wireless, Boost Mobile, MetroPCS, uye Tracfone.
chinyorwa: Best Buy ( 1 , piri )
Tenga iPhone 12 Pro Max kana Galaxy S21 Ultra 5G paVerizon, uye tora imwe yemahara
iPhone 8 Plus vs Galaxy S8 + vs Google Pixel XL: Heavyweight specs kuenzanisa
Google inowedzera T-Mobile voicemail transcript kune iyo foni app